Sirdoonka Israa’iil oo dileen Al-Qaacida lambarka 2-aad ee Iran : Warbixin | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Sirdoonka Israa’iil oo dileen Al-Qaacida lambarka 2-aad ee Iran : Warbixin
Marines-ka Mareykanka waxay waardiye ka yihiin banaanka hore ee Safaarada Mareykanka ee Nairobi 1998 kadib markii lagu burburiyey bam.
Taliyihii labaad ee Al-Qaacida, oo lagu eedeeyay inuu gacan ka geystay abaabulka qaraxyadii 1998-dii lala beegsaday laba safaaradood oo Mareykanku ku leeyahay Afrika, ayaa lagu dilay Iran bishii Ogosto, waxaana dilay saraakiil ka tirsan Israel oo fulinayay amarka Mareykanka, sidaana waxaa Jimcihii qoray New York Times isagoo soo xiganaya saraakiil sirdoon.
Abdullah Ahmed Abdullah, oo uu lasocday nin de gurere Abu Muhammad al-Masri, waxaa toogtay labo nin oo mooto watay magaalada Tehran in kabadan seddex bilood kahor, wargeyska Mareykanka.
Dilka al-Masri, oo loo arkay inuu badal u noqon karo hogaamiyaha haatan ee al-Qaacida, Ayman al-Zawahri, ayaa waxaa fuliyay wakiilada Israel oo ka yimid amarka Mareykanka, afar sarkaal oo sirdoon ah ayaa u sheegay Times.
Ma caddeyn waxa, haddii ay jiraan, doorka Mareykanku ku lahaa dilkii 7-dii Ogosto ee dagaalyahankii u dhashay Masar, ayay jariidaddu ku dartay. Mas’uuliyiinta Mareykanka ayaa sannado badan ku raad joogay al-Masri iyo xubno kale oo ka tirsan Al-Qaacida oo ku sugan Iran, ayay tiri.
Sarkaal Mareykan ah oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters oo codsaday in aan magaciisa la shaacin ayaa diiday in uu xaqiijiyo mid ka mid ah faahfaahinta ku jirta sheekada Times ama uu sheego in ay jiraan wax ku lug leh Mareykanka Golaha Amniga Qaranka ee Aqalka Cad si dhakhso ah ugama jawaabin codsi faallo ah.
Al-Masri waxaa lala dilay gabadhiisa, oo ahayd carmalka wiilka uu dhalay Osama bin Laden, Hamza bin Laden, Times ayaa sidaa werisay.
Madaxii Al-Qaacida Osama Bin Laden, oo abaabulay weeraradii September 11, 2001 ee lagu qaaday Maraykanka, ayaa lagu diley weerarkii Mareykanku ku qaaday Pakistan sanadkii 2011.
Al-Masri waxaa lagu soo daray liiska FBI-da ee “Argagixisada Loogu Raadinayo”, waxaana Mareykanka lagu soo oogay dambiyo la xiriira qaraxyadii safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania, halkaas oo 224 qof lagu dilay boqolaal kalena lagu dhaawacay.
Previous articleMaxay ku heshiiyeen Madaxweyne Farmaajo iyo Qoor Qoor
Next articleCiidamo ka tirsan Etoobiya oi sharci daro ku joogay Soomaliya oo isaga baxaayo
Federal, state and local races across the US will be decided on Election Day Federal, state and local races across the US will be...
Ciidamada Etoobiya oo gooba kale oo muhiom ah ka qabsaday Dagaal...